Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina Mpiara-miombon’antoka ao anatin’ny fifanajana
60 taona izao ny fifandraisana teo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeanina, anisan’ny nanampy an’i Madagasikara tamin’ny fifidianana farany teo.
Apetraka ny fifanajana sy ny fifampizarana tombontsoa eo amin’i Madagasikara sy ireo firenena miara-miasa aminy. Hampandraisina anjara amin’ny fanatanterahana ny vina IEM ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara na ny eto an-toerana na ny any ivelany, araka ny fanambaran’ny minisitry ny raharaham-bahiny Malagasy Naina Andriantsitohaina omaly teny Tsarasaotra Soavimasoandro nandritra ny fanamarihana ny andron’ny vondrona Eoropeanina. Miisa 28 ireo firenena mpikambana eo anivon’ny vondrona eoropeanina ary manodidina ny 512 tapitrisa ny mponina ao. Toekarena faharoa matanjaka indrindra maneran-tany aorian’i Etazonia ny vondrona Eoropeanina ankehitriny. Noho ny fifanarahana ara-toekarena moa dia nitombo avo roa heny ny fanondranan’entana nataon’i Madagasikara nankany eoropa tao anatin’ny 10 taona ary anisan’ny tena manampy sy manohana an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny asa fampandrosoana ny eoropeanina. Fantatra fa hisy tetikasa goavana iarahan’ny roa tonta amin’ny taona 2020.